Hery Rajaonarimampianina : Nihaona fanintelony tamin’ ireo mpandraharaha -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Nihaona fanintelony tamin’ ireo mpandraharaha
21/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nomen’ny Filoham-Pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina lanja manokana ireo mpandraharaha malagasy ny 19 ny volana desambra teo tetsy amin’ny lapam-panjakana Iavoloha, satria dia nanokana fotoana hiresahana amin’izy ireo ny tenany mikasika ny mety hanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana eto Madagasikara, sy ny hanatsarana ny fiaraha-miasa amin’ny ankapobeny. Andiany fahatelo amin’izany ambohim-pihaonana izany io notanterahina io. Nahitana solontena avokoa ireo mpandraharaha eo amin’ny seha-pihariana maro eto amintsika, tahaka ny sehatry ny fambolena, ny fizahan-tany, ny jono, ny fananganana fotodrafitrasa, ny fikirakirana ny teknolojia vaovao, ny angovo sy ny maro hafa.
Nanambara ny Filohan’ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina nandritra io fihaonana io fa “anisan’ny lalàna fototra mankany amin’ny fampandrosoana marina sy maharitra ny firenena ny fiaraha-miasan’ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina tahaka izao, ka rariny raha misy ny fifanakalozan-kevitra amin’izay mety hampandroso sy hampiroborobo ny fandraharahana eto amintsika”. Efa maro ireo ezaka vitan’ny fanjakana hanampiana tosika ny sehatra tsy miankina, ary anisan’izany ohatra ny famahana ny olan’ny hetra, ny fandaniana ny lalàna mikasika ny fampivoarana ny indostria, ny famerenana ny “credit TVA” sy ny maro hafa. Nanamafy hatrany ihany koa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina “ tokony hisy hatrany ny fiaraha-misalahin’ny mpandraharaha amin’ny fitondram-panjakana ahafahana manatratra ny tanjona voarakitra anatin’ny PND”.
Araka ny tombana izay natao manoloana ny ezaka natao nandritra ny fihaonana in-droa nisesy, izay notarihan’ny minisitra Tazafy Armand sy ny komity mpandrindra, dia ny minisiteran’ ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, Dia tsapa fa nisy ny vokatra azo tsapain-tanana. Anisan’ izany ny fanonerana ny trosa tamin’ny TVA, izay tafakatra hatrany amin’ny 91 isan-jato, ary teo ihany koa ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahan-tany, ny fahitana vahaolana mikasika ny fifaninanana tsy ara-drariny. Ankilany ihany koa dia mihamafy hatrany ny ady izay atao amin’ny kolikoly noho ny fananganana ny “poles Anti-Corruption”. Ankilany dia voadinika ihany koa tao anatin’ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana 2018 teo ny mikasika ny hetahetan’ ireo avy eo anivon’ny sehatra tsy miankina, araka ny fanamafisana izay nataon’ny minisitra Tazafy Armand, ary ny fifampiresahana amin’ny tsy miankina ihany koa dia efa tanterahina hatrany amin’ ny faritra.
Tombony lehibe amin’ny fifampiresahan’ny tompon’andraiki-panjakana sy ireo eo anivon’ny sehatra tsy miankina (DPP) tokoa ny fahafahan’izy ireo milaza sy mitondra ny olana zay sedraina amin’ ny asa tanterahiny. Anisan’ny voaresaka ohatra izao ny mahakasika ny tontolon’ny angovo, ny fandrahonana amin’ny lafin’ny fanaraha-maso ny fandoavan-kevitra, na “harcèlement fiscal”, ity olana ity rahateo izay efa nivaha noho ny fametrahana ny paika fanaraha-maso ny hetra, izay neken’ny rehetra. Ity fifampiresahana ity ihany koa dia nahafahana indrindra nitady vahaolana haingana sy azo tsapain-tanana amin’ ny fanontaniana mipetraka mikasika ny famerenana ny trosa noho ny fihindramam-bola mikasika ny TVA , izay niaraha-niasa tamin’ny minisiteran’ ny Vola sy ny tetibola. Noho izany ny tanjona dia ny hanainga hatrany ny tontolo ara-ekonomika eto Madagasikara mba ahafahan’i Madagasikara miarina eo amin’ izay lafiny izay, ary ny tombony dia ny fisondrotan’ ny fiainam-pirenena ho amin’ ny avo indrindra.